HZS စီးရီးကွန်ကရစ်ရောစပ်စက်ရုံသည်ခိုင်မာသောထုတ်လုပ်မှုနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားသောကွန်ကရစ်အမျိုးအစားဖြစ်ပြီးကွန်ကရစ်အမျိုးမျိုးကိုထုတ်လုပ်နိုင်သည်။ ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားသောကြောင့်၎င်းကိုအကြီးစားနှင့်အလတ်စားအဆောက်အအုံဆောက်လုပ်ရေး၊ လမ်း axial အင်ဂျင်နီယာနှင့်ကွန်ကရစ်ထုတ်ကုန်များထုတ်လုပ်ရန်အတွက်လိုအပ်သောစက်ရုံများတွင်ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုသည်။ ၎င်းသည်စီးပွားဖြစ်ကွန်ကရစ်ထုတ်လုပ်ခြင်းအတွက်အကောင်းဆုံးကိရိယာဖြစ်သည်။ ရောနှောခြင်းစနစ်သည်ကောင်းသောအရောအနှောညီညွတ်ခြင်း၊ ရောစပ်ခြင်းအချိန်ကာလတိုတို၊ ၀ တ်စုံများ၏သက်တမ်းကြာရှည်သောသက်တမ်းနှင့်အဆင်ပြေစွာလည်ပတ်ခြင်းနှင့်ထိန်းသိမ်းခြင်းတို့ပါဝင်သော Twin Shaft မသင်မနေရရောနှောခြင်းကိုအသုံးပြုသည်။ ၎င်းသည်အီလက်ထရောနစ်အလေးချိန်စနစ်၊ ကွန်ပျူတာထိန်းချုပ်မှုနှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ် display တို့ကဲ့သို့နောက်ဆုံးပေါ်ထိန်းချုပ်မှုနည်းပညာကိုအသုံးပြုသည်။ အီလက်ထရောနစ်အလေးချိန်တိုင်းကိရိယာများသည်ကြားခံကိရိယာများနှင့်အလိုအလျောက်လျော်ကြေးပေးခြင်းလုပ်ဆောင်ချက်များတပ်ဆင်ထားပြီးတိုင်းတာမှုမြင့်မားသည်။ သဲနှင့်ကျောက်စရစ်ခဲနို့တိုက်ကျွေးရေးစနစ်သည်စားသုံးရန်အတွက်ကျယ်ပြန့်သော herringbone ခါးပတ်ကိုမွေးစားပြီးလမ်းဘေးစင်္ကြံများတပ်ဆင်ထားသည်။ အကောင်းဆုံးကွန်ကရစ်ထုတ်လုပ်ရန်ဆောက်လုပ်ရေးယူနစ်များစွာအတွက်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။
ကွဲပြားခြားနားသောစွမ်းဆောင်ရည်များနှင့်သတ်မှတ်ချက်များရှိသော၎င်း၏ခိုင်မာသောကွန်ကရစ်ရောစပ်စက်ရုံများမှတစ်ဆင့် DKTEC သည်ဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်များကိုအလွယ်တကူဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သည်။
၎င်းတွင်ခိုင်ခံ့သောကွန်ကရစ်အသုတ်ပစ္စည်းကိရိယာအမျိုးမျိုးရှိပြီးရောနှောခြင်း၏ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်သည် ၆၀ m³ / နာရီမှ ၁၈၀ m³အထိရှိသည်။ ဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်များနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အီးမေးလ်အရဖြေရှင်းချက်များကိုလည်းပြုပြင်နိုင်သည်။ sales@dongkunchina.com
ထို့အပြင်ထပ်တူတပ်ဆင်ထားသည့်ကွန်ကရစ်ရောစပ်စက်ရုံတွင် dual ရောနှောစက်များဖြင့်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်သည်တစ်နာရီလျှင် ၂၄၀ ကုဗမီတာနှင့်တစ်နာရီ ၃၆၀ ကုဗမီတာအထိရောက်ရှိနိုင်သည်။
ပစ္စည်း ယူနစ် HZS25
သီအိုရီကုန်ထုတ်စွမ်းအား m³ / h 25
ရောနှော၏ output m³ 0.5
အစာကျွေးအမျိုးအစား Hopper Lifting
Batcher မော်ဒယ် m³ PLD800
လင်းနို့ (တစ်ဘုံနှုန်း) m³ 3
လင်းနို့ (bins ပမာဏ) pc 4
ရောနှောသူ၏စွမ်းအား kw ၁၈.၅
ဓာတ်လှေကား kw ၅.၅
ဥတုအမြင့် မီတာ 1.5 / 2.7 / 3.8
စုစုပေါင်း ကီလိုဂရမ် 1500 ± 2%
အမှုန့်ပစ္စည်း ကီလိုဂရမ် 300 ± 1%
ရေစုပ်စက် ကီလိုဂရမ် ± 1%
အပိုဆောင်းစုပ်စက် ကီလိုဂရမ် ± 1%
ပစ္စည်း ယူနစ် HZS35
သီအိုရီကုန်ထုတ်စွမ်းအား m³ / h 35
ရောနှောသူ၏စွမ်းအား kw 30
ဓာတ်လှေကား kw ၇.၅
စုစုပေါင်း ကီလိုဂရမ် 2000 ± 2%
အမှုန့်ပစ္စည်း ကီလိုဂရမ် 500 ± 1%
ပစ္စည်း ယူနစ် HZS60
လင်းနို့ (bins ပမာဏ)
အရွယ်အစား (L × W × H)
၂၀ ± ၁%
ပစ္စည်း ယူနစ် HZS90
ပစ္စည်း ယူနစ် HZS120
၅၀ ± ၁%
ပစ္စည်း ယူနစ် HZS180
၁၀၀ ± ၁%
HZS စီးရီးကွန်ကရစ်ရောစပ်စက်ကိုပေါင်းစပ်စနစ်၊ ပစ္စည်းအသုတ်စနစ်၊ အလေးချိန်စနစ်နှင့်လျှပ်စစ်ထိန်းချုပ်စနစ်တို့ဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။ ၎င်းသည်ကြီးမားသောနှင့်သေးငယ်သောဆောက်လုပ်ရေးနေရာများ၊ precast ကွန်ကရစ်ထုတ်ကုန်များနှင့်ထုတ်လုပ်မှုစက်ရုံများအတွက်သင့်တော်သည်။
Twin Shaft ကွန်ကရစ်ရောနှောခြင်းသည်ခိုင်မာသောရောနှောခြင်းစွမ်းရည်၊ ယူနီဖောင်းအရည်အသွေးနှင့်ထုတ်လုပ်မှုမြင့်မားသည်။ ၎င်းသည်ကွန်ကရစ်အတွက်ခြောက်သွေ့မှု၊ ခြောက်သွေ့ခြောက်သွေ့မှု၊ ချောဆီနှင့်အဓိက ၀ င်ရိုးစနစ်ကိုမူလအထုပ်မှတင်သွင်းပြီးဟိုက်ဒရောလစ်တံခါးဖွင့်လှစ်သည့်ယန္တရားသည်လိုအပ်သောအလိုအလျှောက်တံခါး၏အဖွင့်ကိုညှိနိုင်သည်။ အဓိကရောနှောစက်၏ရောစပ်သည့်ရိုးတံသည်ရိုးတံပေါ်ရှိဘိလပ်မြေများစုစည်းခြင်းကိုထိထိရောက်ရောက်တားဆီးရန်အတွက်စွဲကပ်မှုနည်းသောနည်းပညာကိုအသုံးပြုသည်။ မော်တာများယိုစိမ့်မှုကိုထိရောက်စွာကာကွယ်နိုင်ရန်နှင့်ရောစပ်မှုစနစ်တစ်ခုလုံး၏စဉ်ဆက်မပြတ်နှင့်ရေရှည်လည်ပတ်မှုသေချာစေရန်အတွက်ရိုးတံအဆုံးတံဆိပ်သည်ထူးခြားသောတံဆိပ်ခတ်ခြင်းပုံစံကိုအသုံးပြုသည်။ သန့်ရှင်းရေးစနစ်သည်မြင့်မားသောဖိအားရှိသောရေစုပ်စက်ကိုအလိုအလျောက်ထိန်းချုပ်ခြင်းနှင့်လက်ဖြင့်ထိန်းချုပ်ခြင်းကိုပြုလုပ်သည်။ ရေထွက်ပေါက်ပေါက်များသည်ရောနှောဗိုင်းလိပ်တံ၏အထက်တွင်တည်ရှိသည်။ ၎င်းသည်ရောနှောခြင်းစွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုးတက်စေသည်၊ ရေငွေ့တိုးစေသည်၊ ဖုန်မှုန့်ညစ်ညမ်းမှုကိုလျှော့ချပြီးဘိလပ်မြေစုစည်းခြင်းကိုထိရောက်စွာဖယ်ရှားပေးသည်။ ၎င်းသည်အကြီးစားဆောက်လုပ်ရေး၊ စီးပွားဖြစ်ကွန်ကရစ်ကုမ္ပဏီများအတွက်သင့်လျော်သည်။
စုစုပေါင်း Batching စနစ်
အသုတ်ပြုစက်ကိုရွေးချယ်ပါ။ အစာကျွေးခြင်းယန္တရားကို "ထုတ်ကုန်" ပုံသဏ္arrangedာန်အရစီစဉ်ပေးပြီးခါးပတ်သယ်ဆောင်ဖြင့်ကျွေးသည်။ တစ် ဦး ချင်းပစ္စည်းအလေးချိန်နှင့်စုပေါင်းပစ္စည်းအလေးချိန်၏နည်းလမ်းနှစ်မျိုးချမှတ်; အီလက်ထရောနစ်အလေးချိန်, PLC ထိန်းချုပ်မှု, ဒစ်ဂျစ်တယ် display ကို; တိကျမှန်ကန်သောအလေးချိန်၊ တိကျမှန်ကန်သောတိကျမှု၊ အမြန်နှုန်း၊ အမြန်ထိန်းချုပ်နိုင်မှု၊
သွင်းကုန်အစိတ်အပိုင်းများ, ယုံကြည်စိတ်ချရသောစွမ်းဆောင်ရည် Apply; ဝေးလံခေါင်သီသောစီမံခန့်ခွဲမှု၊ အသိဉာဏ်ထိန်းချုပ်မှု, အလိုအလျောက်ထိန်းချုပ်မှု, တ ဦး တည်းအတွက်လက်စွဲစာအုပ်ထိန်းချုပ်မှု; အချိုးအစားသိုလှောင်မှု, အလိုအလျောက်တစ်စက်လျော်ကြေးငွေ, အကြီးစား, အောက်မှာ - စကေးနှိုးဆော်သံဆုံးမခြင်းနှင့်အတူ; ပစ္စည်းကိရိယာတွင်လည်ပတ်မှုစောင့်ကြည့်ခြင်း၊ အချက်အလက်သိုလှောင်ခြင်း၊ ပုံနှိပ်ခြင်းစသည့်လုပ်ဆောင်ချက်များရှိသည်။
အမှုန့်များ၊ ရေနှင့်အပိုပစ္စည်းများကိုအီလက်ထရောနစ်အတိုင်းအတာဖြင့်တိုင်းတာသည်။ အသုတ်တိကျမှန်ကန်မှုသည်မြင့်မားပြီးတိုင်းတာမှုသည်တိကျသည်; ဘိလပ်မြေ၊ ပျံပြာများနှင့်ရေတိုင်းတာသည့်ဟော့ပါဘောင်တွင်တည်ငြိမ်သောတည်ဆောက်ပုံနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရမှုမြင့်မားသောအာရုံခံကိရိယာသုံးစုံဖြင့်ဘောင်တွင်ထောက်ပံ့သည်။ ထို့အပြင်ထပ်မံတိုင်းတာသည့်အရာအားတစ်ခုအားဓာတ်လှေကားအမှတ်အာရုံခံကိရိယာဖြင့်တိုင်းတာသည်
အသေးစားရောနှောခြင်းစခန်း၏အသေးစိတ်စျေးနှုန်းအချက်အလက်များကိုသင်သိလိုပါကကျွန်ုပ်တို့၏အရောင်း hotline: 0086-571-88128581 သို့တိုက်ရိုက်ခေါ်ဆိုနိုင်သည်။
စက်နှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ပတ် ၀ န်းကျင်သန့်ရှင်းမှုရှိမရှိစစ်ဆေးပါ။
အာရုံခံကိရိယာကိုပုံမှန်သုညသို့ပြန်သွားစေရန်အတွက် Hopper တွင်စုဆောင်းထားသောပစ္စည်းများကိုရှင်းလင်းပါ။
4. မော်တာများနှင့်လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများအပူသို့မဟုတ်အပူဆူညံခြင်းရှိမရှိကိုစစ်ဆေးပါ၊ အညွှန်းသည်ပုံမှန်လား၊ အချက်ပြစနစ်နဂိုအတိုင်းရှိမရှိစစ်ဆေးပါ။
အဖွင့်အပိတ်နှင့်လိုအပ်ချက်များကိုပြည့်မီစေရန်အတွက်ဆလင်ဒါ၊ butterfly အဆို့ရှင်နှင့် solenoid အဆို့ရှင်ကိုမကြာခဏစစ်ဆေးပါ။
6. စနစ်တစ်ခုစီကိုမကြာခဏစစ်ဆေးပြီးဖုန်ယိုစိမ့်မှု၊ ဓာတ်ငွေ့ယိုစိမ့်မှု၊ ရေနံယိုစိမ့်မှုနှင့်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားယိုစိမ့်မှုများရှိပါကအချိန်မီကိုင်တွယ်ပါ။
၈။ အပြောင်းအလဲတိုင်းသည်လေထုဖိအား၊ လေသိုလှောင်ကန်နှင့်စစ်ထုတ်စက်၏အတွင်းပိုင်းရေကိုထုတ်လွှတ်ပြီးလည်ပတ်နေစဉ်အတွင်းဖြစ်ပေါ်လာသောချွတ်ယွင်းချက်များကိုဖယ်ရှားသင့်သည်။
9. လိပ်ပြာအဆို့ရှင်၊ အရောအနှော၊ solenoid အဆို့ရှင်၊ လေစစ်စက်နှင့်ဆီအငွေ့စက်ကိုသက်ဆိုင်ရာညွှန်ကြားချက်များနှင့်အညီထိန်းသိမ်းထားသည်။
Automaticaggregate Batching ဓာတ်မြေသြဇာရောနှော, အလိုအလျှောက်စုစုပေါင်း Batching စက်, စုစုပေါင်း Batching စနစ်, စုစုပေါင်း Batching ထိုးစနစ်, ကွန်ကရစ်ရောနှောအပိုပစ္စည်းများ, အလိုအလျှောက်စုစုပေါင်း Batching စနစ်,